AKHRISO:- Mahad Salad’ wadaadadu ma waayen wax ka muuhiimsan lug la baneeyo oo ay ka hadlaan?! – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Mahad Salad’ wadaadadu ma waayen wax ka muuhiimsan lug la baneeyo oo ay ka hadlaan?!
Hiiraan Xog, Apr 20, 2018:- Xildhibaan Mahad Salad ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray Culumada ee ku saabsanaa bandhig faneedka lagu qaban doono magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu uga hadlayo hadalka ka soo yeeray Culumada.
Wadaad aan lahayn Ardo ama Xer ku xiran oo Diinta uu baro. Aanan joogin Masaajid, Mowlac ama xitaa Dugsi Qur’aan caruurta wax lagu baro. Qol ka degan Hotel, kirada qolka iyo cuntada uu cunayana Dowladu ka bixiso, xafladaha Madaxda Dowladu yimaadaana ka khudbeeya kana duceeya, hadalkana hadba sida madaxdu u rabto ugu dhiga waliba iyaga oo daliil raacinaya, in ay maanta kasoo saaraan “FATWO” gabar fannaanad ah oo dalka timid iyaga oo ku andacwoonaya “WAXAA NALOO SHEEGAY IN AY HEESI DOONTO IYADA OO LUG QAAWAN malla waydiiyay:
Cidda u sheegtay in gabadhu isqaawin doonto!
Waxa ay uga hadli la’yihiin una sixi la’yihiin qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee maalin waliba ay geysanayaan ardaydii ay iyagu wax soo bareen ee sida qaloocan diinta uga fahmay!
Waxa u diiday in ay Masaajidyada iyo Mowlacyada tagaan dadkana diinta baraan intii ay ku mashquuli lahaayeen lug gabar fannaanad ah baneysay iyo dhex fariisiga fadhi-ku-dirirka hoteelada ay deganyihiin!